Miyey Kareena Kapoor Khan Ka Badbaaday Kangana Ranaut Maadaama Ay Damacday Booskeeda Rangoon? - Hablaha Media Network
Miyey Kareena Kapoor Khan Ka Badbaaday Kangana Ranaut Maadaama Ay Damacday Booskeeda Rangoon?
HMN:- Filimka Rangoon ee uu agaasinkiisa leeyahay Vishal Bhardwaj ayaa waxaa tiyaatarrada la saari doonaa Isbuucaan. Filimkaan ayaana waxaa muddo dheer hadalhaayey warbaahinta India sababtoo ah wuxuu markii ugu horreysay shaashadda ku mideeyey xiddigaha Kangana Ranaut, Shahid Kapoor iyo Saif Ali Khan.
Warbaahinta India ayaana waxaa xiiso gooni ah u lahaa inay markii ugu horreysay hal filim iskala shaqeynayaan Shahid Kapoor iyo Saif Ali Khan sababtoo ah waxaa la xusuustaa inuu u dhexeeyey khilaaf muddo dheer ah maadaama ay labadaan atoore xiriir jaceyl la wadaageen atariishada caanka ah Kareena Kapoor Khan.
Si kastaba ha ahaatee, Shahid Kapoor iyo Saif Ali Khan taasi kama aysan muuqan, waxayna si wanaagsan ugu riyaaqeen shaqada filimkaan, Bebo ayaa sidoo kale daaha ka qaaday inay ku farxi laheyd haddii jaceylkeedii hore Shahid iyo seygeeda Saif ay shaashadda la wadaagi laheyd oo ay atariisho ka noqon laheyd filimkaan Rangoon.
Intii lagu jiray xalqaddii ay ku laheyd showga Koffee With Karan Season 5, Kareena Kapoor ayaa la weydiiyey haddii ay jirto sabab aysan ugu qanacsaneyn filimka Rangoon waxayna tiri: “Waxa keliya ee aan weydiisan lahaa waxay noqon laheyd sababta aanan la iiga dhigin atariishada filimka Rangoon”.
Markii uu hadalkaani kasoo baxay Bebo, taageereyaal badan oo shirkadda aflaanta Bollywood Industry ah ayaa rajeeyey inay arkaan seddaxdooda oo shaashadda isla wadaagaya waa Kareena, Shahid Kapoor iyo Saif Ali Khan.
Si kastaba ha ahaatee, atariishada hogaamineysa filimka Rangoon, Kangana ayaa wax laga weydiiyey hadalkii Kareena iyadoo markaan lagu casuumay showga Koffee With Karan Season 5, waxayna ku jawaabtay:
“Jillaa kasta wuxuu leeyahay hab jilliin u gaar ah. Haddii ay Kareena sameyn laheyd filimkaan oo ay doorkeyga ciyaari laheyd si ka duwan sida aan wax u jillay ayey u sameyn laheyd. Waa atariisho wanaagsan, waxayna sameysay aflaan cajiib ah. Ma dhahayo doorkaan aniga keliya ayaa sameyn karay, sababtoo ah waxaa jira atariishooyin badan oo Bollywood ah oo doorkaan sameyn karay”.
Markaan Kareena waxay ka badbaaday inay weerar kala kulanto atariishada qowlkeedu uu qodxaha leeyahay Kangana.